Olee otú Bipute ozi ederede site na iPhone 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS
Olee otú ibipụta odide ndị e si iPhone 5? M mkpa bipụta ọtụtụ ihe dị mkpa iPhone ozi ederede ịkọrọ ndị ọrụ ibe m. Bụla ga-ekwu? - Amy
N'agbanyeghị ihe ọ bụla kpatara ya bụ, mgbe ị chọrọ ibipụta ozi ederede site na iPhone, e nwere mgbe a ụzọ. Ihe kacha ụzọ bụ na-a screenshot na gị iPhone ederede na-ezite ya a wireless iOS-gakọrịtara. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị chọrọ bipụta a mmaji nke ozi ederede site na gị iPhone, otú a ga-mgbe-eme ka gị satisified, n'ihi na screenshot naanị-egosi na a snippet gị akakabarede. Ka ibupute a zuru ezu ozi ederede akakabarede si gị iPhone, ị ga-mma mbupụ ha si gị iPhone na kọmputa, na mgbe ahụ ibipụta ha.
Iji SMS si iPhone, ị nwere ike nweta enyemaka site n'aka ngwá ọrụ abụọ. Otu bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery), na ndị ọzọ bụ Wondershare TunesGo Ochie. Ha abụọ eme ka i nwee mbupụ ederede ozi, MMS na iMessages na Mgbakwụnye ka a (n) HTML, XML ma ọ bụ TXT faịlụ, otú i nwere ike ibipụta ya mfe.
Ngwọta 1: Bipute ozi ederede site na iPhone na Dr.Fone maka iOS (Mac & Windows)
Ngwọta 2: Bipute iPhone SMS na Wondershare TunesGo Ochie (Mac & Windows)
The World Mbụ iOS Data Recovery Software maka Personal Ọrụ
mbupụ ẹdude na-ehichapụ Data na gị iPhone, iPad na iPod aka
Zọpụta ozi niile na iPhone na kọmputa na HTML format, gụnyere SMS, MMS na iMessages.
Ebupụ ozi kpọmkwem site iPhone, iTunes nkwado ndabere na mpaghara iCloud ndabere.
Ọ bụghị naanị na ozi, na-akwado kọntaktị, ndetu, WhatsApp akụkọ ihe mere eme, ncheta, na ndị ọzọ, ruo 18 faịlụ na ụdị.
-Arụ ọrụ maka iPhone 6 Plus / 6 / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS, niile iPads na iPod aka 5/4.
Nzọụkwụ 1 Wụnye Wondershare Dr.Fone na kọmputa
Download, wụnye na-agba ọsọ Wondershare Dr.Fone na kọmputa gị. Na mgbe ahụ jikọọ gị iPhone na kọmputa gị site na a eriri USB, leting a software ịchọpụta gị iPhone-akpaghị aka.
Mfe Nyefee iPhone, iPod & iPad ka iTunes & Computer
Zọpụta ederede ozi, MMS & iMessages na Mgbakwụnye dị ka a HTML / XML / TXT faịlụ nke mere ị nwere ike mfe bipụta ya si mgbe e mesịrị.
Jikwaa kọntaktị: Bubata, mbupụ, wepụ duplicates & mmekọrịta na Outlook.
Nyefee na songs, videos, listi ọkpụkpọ, iTunes U, Pọdkastị ka & si gị PC / iTunes.
Copy foto & ọba iji / si gị PC & iDevice
100% dakọtara na iOS 8, ọhụrụ iPhone 6 Plus na iPhone 6.
Olee otú Jiri TunesGo Ochie ibipụta iPhone Ozi
Nzọụkwụ 1. Jikọọ iPhone
Jikọọ gị iPhone na kọmputa mgbe na-agba ọsọ usoro ihe omume. Mgbe ahụ, ọ ga-egosipụta gị iPhone mgbe ịchọputa ya.
Nzọụkwụ 2. Họrọ SMS
Ị selectively họrọ ihe ọ bụla ozi ihe ị chọrọ maka obibi akwụkwọ. Dị nnọọ nne Mmetụta ya n'oge Michael.
Nzọụkwụ 3. Export SMS
Ị nwere ike mbupụ niile họrọ ozi dị ka ihe HTML faịlụ gị na kọmputa. Ọ bụ zuru okè n'ihi obibi akwụkwọ.
Nzọụkwụ 4. Bipute iPhone SMS
Ị nwere ike ijikọ kọmputa a na ngwa nbipute na-amalite na-ebi akwụkwọ ozi ederede na iPhone. Ọ bụ otu-click ọrụ ugbu a.
Mụta ihe banyere Tunesgo Ochie >>
iPhone Text Iweghachite Software
Olee otú Naghachi iPhone ehichapụ Photos
> Resource> iPhone> Olee otú iji Bipute ozi ederede site na iPhone